स्थानिय समुदाय, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यले एनएलजी सफल भयो – दिपक पोखरेल सँगको कुराकानी – Insurance Khabar
स्थानिय समुदाय, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यले एनएलजी सफल भयो – दिपक पोखरेल सँगको कुराकानी
प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७५, शनिबार २१:३३
एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक बर्षमा कृषि बीमाको क्षेत्रमा उचित योगदान पुर्याएको भन्दै कृषि मन्त्रालयले सर्वोउत्कृष्ट बीमा कम्पनीको रुपमा सम्मान गरेको थियो । मन्त्रालयले कम्पनीहरुले कृषि बीमा बापत संकलन गरेको बीमाशुल्क, बीमा जारी गरेको क्षेत्र, बीमाका काम अभिकर्ता लगायतका विभिन्न परिसूचक निर्धारण गरेको थियो । उक्त सुचांकमध्ये एनएलजी इन्स्योरेन्स सबैभन्दा अग्रपंक्तीमा देखिएपछि मन्त्रालयले कम्पनीलाई सम्मान गरेको हो ।
कम्पनीलाई कृषि बीमाको क्षेत्रमा काम गर्नका लागी थप हौसला प्रदान गर्न मन्त्रालयले सम्मान गरेको हो । एनएलजीका साथै मन्त्रालयले उत्कृष्ट कम्पनीका रुपमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि सम्मान गरेको थियो । नेपालमा संचालित पुराना १७ निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये सबैले कृषि बीमा जारी गर्दै आएका छन् । समितिले कम्पनीहरुलाई जिल्ला नै तोकेको कृषि बीमा जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । यद्यपी अन्य कम्पनीको तुलनामा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रस्तुती कसरी राम्रो र कम्पनी कसरी सफल हुन पुग्यो भन्ने बिषयमा विगत २६ बर्ष देखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय र पछिल्लो ६ बर्ष देखि कृषि बीमा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कम्पनीका कृषि विभागप्रमुख दिपक पोखरेल सँग इन्स्योरेन्स खबरकर्मी रिना खत्रीले गरेको कुराकानीको सार:
गत आर्थिक बर्ष तपाईको कम्पनी सर्वोउत्कृष्ट कृषि बीमा जारी गर्ने कम्पनी बन्न सफल भयो । तपाईहरु कृषि बीमाको क्षेत्रमा यति अगाडी बढ्नुको कारण के हो ?
कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्ष देखि यस्तो पुरस्कार वितरण गर्न सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले कम्पनीहरुले गत आवमा गरेको कामको मूल्यांकन गरी पुरस्कार वितरण गरेको हो । यसको लागी मन्त्रालयले ४-५ वटा केही सुचकहरु छुट्याएको थियो । बीमा गर्ने किसानहरुको सङख्या, काम गर्ने एजेण्टको सङख्या , बिमाशुल्क र जिल्लाको पहुँचको आधारमा मूल्याकन गरिएको हो । मन्त्रालयले प्रत्येक कम्पनीको माथिको सुचकहरु हेरेको थियो । त्यसमा हाम्रो कम्पनी अब्बल देखियो । र हामीले सर्वोउत्कृष्ट पुरस्कार जित्न सफल भयौ । हामीले हाल ४९ वटा जिल्लामा कृषि बीमा संचालन गर्दै आएका छौ । हामी यस क्षेत्रमा सफल हुनुको कारण भनेको हामीले सहकार्यमा काम गरेका छौ । हामी गाउँ गाउँमा गएर स्थानिय निकाय, सहकारी र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्यौ । जसका कारण हामी अगाडी बढ्न सफल भएका हौ ।
अन्य कम्पनीको तुलनामा तपाईको कम्पनी के अर्थमा फरक छ ?
अन्य कम्पनी र हामीमा रहेको फरक भनेको हामी स्टाफलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्दैनौ । मुख्यत: हामीले तीन कुरालाई विशेष प्राथमिता दियौ । स्थानिय, सहकारी र गैरसरकारी संस्थासँगको कार्य र त्यसमा थप विज्ञ एवम् स्थानिय प्राविधिकको सहयोगको कारण हामी एक कदम अघि बढ्न सफल भयौ । सर्वप्रथम हामीले स्थानियलाई नै विश्ववास ग¥यो । हामीले स्थानिय स्तरमा रहेको प्राविधिकलाई नै बीमा सम्बन्धि तालिम प्रदान गरेर उहाँहरुमा भएको प्राविधिक ज्ञानलाई बीमामा ढालेर प्राविधक मार्फत हामी काम गरीरहेका छौ । जसको कारणले गर्दा पनी हामी अरुमा भन्दा फरक भएका हौ ।
गत आवमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले कृषि बीमा मार्फत कति बिमाशुल्क संकलन गर्यो त ?
हामीले गत बर्षमा १२ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको थियौ । आव २०७३/७४ मा भने हामीले १० करोड रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेका थियौ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत बर्ष २ करोड रुपैयाँ बृद्धि भएको छ । यसैगरी अघिल्लो बर्ष हामीले ८ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियौ । यो वर्ष पनि हामील करीब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्यौ ।
गत बर्ष कम्पनीले कुन जिल्लामा सबैभन्दा बढी कृषि बीमा गराउन सफल भयो ?
हामीले गत बर्षको कुरा गर्ने हो भने ललितपुर जिल्लाबाट बढी कृषि बीमा गराउन सफल भयौ । त्यस क्षेत्रमा पनी हामीले धेरै पशु बीमा गर्यौ ।
सरकारले कृषि बिमामा दिदै आएको अनुदान रोकेको छ, यसले कम्पनीहरुलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको छ कि छैन ?
सरकारले कृषि बिमा दिदै आएको अनुदान ठयाक्कै रोकिएको चाहि छैन । तर, ढिला गरी आउने गरेको छ । गत आर्थिक बर्षको हामीले २ महिनाको मात्र अनुदान पाएका छौ । अनुदान ढिला आउँदा कम्पनीको व्यवसायमा असर भने परेको छ । किनभने कम्पनीहरुले कृषकहरुलाई सेवा भने दिदै आएका छन् । दाबी भुक्तानी पनि दिदै आएका छन् । तर, कम्पनीले पाउँने रकम भने रोकिएको छ । त्यसैले कम्पनीलाई असहज भने भएको छ ।
कृषि बीमाको चुनौतीहरु के–के हुन् ?
कृषि बीमाको पहिलो चुनौती भनेको नेपालमा व्यवसायिक रुपमा कृषि बिमा विकास हुन नसक्नु हो । अझै पनि मानिसहरुले आफनो परिवारको लागी मात्रै एउटा दुईवटा पशु पाल्ने र खेती गर्ने गर्छन् । केही थोरैले मात्रै व्यवसायिक रुपमा कृषि पेशा अपनाएका छन् । अर्को समस्या भनेको कृषकहरुमा कृषि बीमा सम्बन्धि चेतना पनि छैन । जसका कारण कृषि बीमा जारी गर्न कृषकहरुलाई बुझाउन कठिन भएको छ ।
कृषि बीमा गर्दा किसानलाई के फाईदा त?
एउटा कृषकको लागी कृषि बीमा एकदम उपयोगी हुन्छ । तर, बीमा भनेको फाईदा होईन सुरक्षा हो । यदि कृषकले आफनो पशुपन्छी वा खेतीको बीमा गर्छ भने कुनै कारणले उक्त क्षति भएमा कृषकले क्षतिपूर्ति पाउँछ । अर्थात् कुनै कारणवश (योजना लेखिएका कारण) कृषकले बीमा गरेको पशुपन्छी वा खेतीपातीमा कुनै हानी नोक्सानी भएपनि कृषकले चिन्ता लिनु पर्दैन । कम्पनीले क्षति भएको रकमको ९० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्छ ।
कृषि बीमा गर्दा कृषकले कुन–कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
देखासिकी गरेर बीमा गर्नु हुँदैन । सबैभन्दा पहिला कृषकले आफुले के को बीमा गर्न चाहेको हो सो बिषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । उक्त बीमा गर्न चाहेको पशुपन्छी वा खेतीलाई कस्तो खालको बीमा खरिद गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्ने र सोधपुछ गर्ने गर्नुपर्छ । बीमा गरिसकेपछि बीमा योजना लेखिएका शर्तहरु राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ । लेखिएका शर्तहरु पालना गर्नुपर्छ । क्षति भएमा प्रमाण सहित जतिसक्दो छिटो कम्पनीमा खबर गर्नुपर्छ ।
कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्दछ ?
स्थानिय तह र बीमा कम्पनी बीच समन्वय गरी बीमा सम्बन्धित तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बीमा सम्बन्धि तालिमलाई अझ फलदायी बनाउन स्थानिय सहभागीता पढाउनु पर्छ । बीमा फाईदा होईन सुरक्षा हो भन्ने कुरा कृषकमा बुझाउँनु जरुरी छ ।
नेपाल इन्स्योरेन्सको बुक क्लोज : कहिलेसम्म शेयर किन्नेले पाउछन् ११ प्रतिशत बोनस शेयर ?
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको नयाँ कर्पोरेट भवनको शिलान्यास
लुम्बिनी जनरलको संस्थापक शेयर जेठ १३ गतेदेखि लिलामीमा